Ukufunda izinto ezibhalwe ngabafundi baseNgesi ngamanye amaxesha kunokuba nzima ngenxa yomsebenzi onzima wokubhala izakhiwo ezinkulu ngesiNgesi. Ootitshala be-ESL / EFL banokulindela amaphutha kummandla ngamnye kwaye benze izivumelwano ezifanelekileyo kwiimpawu zabo. Iibrubriki kufuneka zisekelwe ekuqondeni okunamandla kumanqanaba okuthetha abafundi baseNgesi . Le ngqungquthela yokubhala itekisi inikezela inkqubo yokufaka amanqaku afanelekileyo kubafundi besiNgesi kuneeyubrikhi eziqhelekileyo.
Le ncwadana yokubhala i- rubriki iqulethe amanqaku kungekhona nje kuphela kwintlangano kunye nesakhiwo, kodwa nakwiimpazamo ezibalulekileyo zesigwebo ezifana nokusetyenziswa okuchanekileyo kokuxhumanisa ulwimi , isipelo kunye nolwimi.
Umxholo Ukubhala uRubric
Udidi 4 - Iimfuneko ezingaphezulu 3 - Ukulindela izilindele 2 - Ifuna ukuphuculwa 1 - Ayinelanga Inqaku
Ukuqonda Abaphulaphuli Ubonisa ukuqonda okuthe tye ngabaphulaphuli abajoliswe kuwo, kwaye usebenzisa igama elifanelekileyo nolwimi. Ilungiselela iingxaki ezinokwenzeka kwaye idibanisa ezi nkxalabo ngobungqina obunokuba ngabafundi abanokwenzeka. Ukubonisa ukuqonda ngokubanzi kwabaphulaphuli kwaye isebenzise ngokubanzi isigama nesilwimi zolwakhiwo. Ubonisa ukuqonda okulinganiselwe kwabaphulaphuli, kwaye ngokubanzi isebenzisekile, ukuba kulula, isigama kunye nolwimi. Akwacaci ukuba ngabaphi abaphulaphuli ekujoliswe kulo mbhalo.
Ingxowa / Intshayelelo Isiqendu sesingeniso siqala ngengxelo yokuba bobabini baqwalasela umfundi kwaye kufanelekile kubaphulaphuli. Isiqendu sesingeniso siqala ngxelo ezama ukuthatha ingqalelo yomfundi, kodwa ayizalisekanga ngandlela-thile, okanye ingafanelekanga kubaphulaphuli. Isiqendu sesingeniso siqala ngengxelo enokuthi ithathwa njengengqalelo ye-getter, kodwa ayicaci. Isiqendu sesingeniso asiququzekisi okanye uthabathe ingqalelo.
Iingxaki / Iinjongo eziphambili Ukwakhiwa Isiqendu sesingeniso sineengcamango ezicacileyo zeengcamango eziphambili kunye neziphakamiso ezicacileyo malunga nendlela umzimba wesincoko uza kuxhasa ngayo le ngqungquthela. Isiqendu sesingeniso siqulethe isicatshulwa esicacileyo. Nangona kunjalo, izivakalisi ezilandelayo zenkxaso ayifanelekanga, okanye zixhomekeke ngokungahambiyo kumhlathi womzimba. Isiqendu sesingeniso sineenkcazo ezinokuthi zithathwa njengengcamango okanye imbono ephambili. Nangona kunjalo, kukho inkxaso encinane kwinqanaba elilandelayo. Isiqendu sesingeniso asikho ncam
Ibhunga / Ubungqina kunye nemizekelo Imihlathi yomzimba inikezela ubungqina obucacileyo kunye nezibonelo ezininzi ezisekela intsingiselo yesitatimende. Imihlathi yomzimba inikezela ngokucacileyo ukuxhomekeka kwintetho yesistim, kodwa kunokufuna imimiselo engaphezulu okanye ubungqina obunobungqina. Imihlathi yomzimba ayifanelekanga ngesihloko, kodwa engenakho ukuxhamla okucacileyo, ubungqina kunye nemizekelo ye -sissis okanye ingcamango ephambili. Imihlathi yomzimba ayinxulumene, okanye inxulumene ngokuthe ngqo kwisihloko sendaba. Imizekelo kunye nobungqina bubuthathaka okanye abukho.
Ukuvalwa kwesiGaba / Ukupheliswa Umhlathi wokuvala unikeza isigqibo esicacileyo ngempumelelo ekuchazeni isikhundla sombhali, kunye nokuqulethelwa ngokufanelekileyo kwengcamango ephambili okanye intsingiselo yesincoko. Umhlathi wokuvala uphetha isicatshulwa ngendlela eyanelisayo. Nangona kunjalo, isikhundla sombhali kunye / okanye ukubuyiswa ngokufanelekileyo kweengcamango eziphambili okanye isicatshulwa singabikho. Ukuphelisa kubuthathaka kwaye ngamanye amaxesha kudibanisa ngokwemiqathango yombhali ngokungakhange kubhekisele kwingcamango ephambili okanye ingcamango. Isiphetho asikho nto encinci okanye akukho niselo ekuqhubekeni kwimihlathi okanye isikhundla somlobi.
Ukwakhiwa kwezivakalisi Zonke izivakalisi zakhiwe kakuhle ngeephoso ezincinane kakhulu. Izakhiwo zezivakalisi eziqhelekileyo zisetyenziswe ngokufanelekileyo. Izivakalisi ezininzi zinokwakhiwa kakuhle ngeephoso ezininzi. Ezinye iinzame ezakhiweyo zezivakalisi eziyinkimbinkimbi ziphumelele. Ezinye izivakalisi zakhiwe kakuhle, ngelixa ezinye ziqulethe iimpazamo ezinkulu. Ukusetyenziswa kwesakhiwo semigwebo esinzima kunqongophele. Izivakalisi ezimbalwa kakhulu zakhiwe kakuhle, okanye izakhiwo zezivakalisi zilula kakhulu.
Ukudibanisa ulwimi Ukudibanisa ulwimi kusetyenziswa ngokuchanekileyo kwaye kaninzi. Ukuqhagamshelanisa ulwimi kusetyenziswa. Nangona kunjalo, kubonakala ukuba iimpazamo ngokuchaneka ngokuchanekileyo okanye ukusetyenziswa kweelwimi. Ukuqhagamshelana ulwimi kudlalwa kusetyenziswa. Ukuqhagamshelana ulwimi akusoze kwenzeka okanye akuzange kusetyenziswe.
Igrama kunye nopelo Ukubhala kubandakanya akukho okanye iimpazamo ezincinci ezimbalwa kwigrama, isipelingi. Ukubhala kubandakanya inani elincinci leephene kwigrama, isipelingi kunye neziphumlisi. Nangona kunjalo, ukuqonda komfundi akuphazamiseki zezi mpazamo. Ukubhala kubandakanya iiphoso ezininzi ngegrama, isipelingi kunye neziphumlisi, ngezinye izihlandlo, ezivimbela ukuqonda komfundi. Ukubhala kubandakanya amaphutha amaninzi ngegrama, isipelingi kunye neziphumlisi ezenza ukuqonda komfundi kube nzima.
Ukukhawuleza Ukutshata Isifundo
Iimpawu zeParifical i-Marsupial kunye neeprofayili
"I-Cinema Limbo" - Umbini womntu wesibini - i-Ten Minute Play
Izibambiso zesiTenzi zesiTali: 'Morire' (ukuya ku-Die)
Iingoma zeAll Alt Rock kwiGititar
Indlela Yokufunda Umoya Xa Uhamba Ngendlela